Iitishi zeGesi zee-Canopy, i-Led Gas Station, iLight Lights I-Glass Station kunye nabathengi baseChina
Inkcazo:Izibane zeGesi zokuKhanya,Isitishi seGesi esilahlayo,Izibane ezibhekiselele kwiSitishi seGesi,Ukukhanya kweSitishi seGesi,,
Home > Imveliso > Ukukhanya kweSitishi seGesi
Iintlobo zeMveliso ze- Ukukhanya kweSitishi seGesi , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, Izibane zeGesi zokuKhanya , Isitishi seGesi esilahlayo ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Iimitha zokuLungisa iLed Retrofit Canopy Lights 150W 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-Led Square I-Canopy Lighting 150w 5000k  Qhagamshelana Ngoku
I-Led Canopy Lights I-Retrofit Kit 150W 18000LM  Qhagamshelana Ngoku
I-Led Gas Canopy Retrofit Kits Izibane 150W  Qhagamshelana Ngoku
I-Outdoor Led Outbreed Canopy Lighting 150W  Qhagamshelana Ngoku
Ixabiso leMveliso yeeLayibhondi iLove Mount Canopy Lights 100W  Qhagamshelana Ngoku
I-Led Canopy Light Fixtures Retrofit Kit 150W  Qhagamshelana Ngoku
I-Canopy Ceiling Light Bulb ne-Photocell 150w  Qhagamshelana Ngoku
I-Canedy Lighted Fixtures kwiSitishi seGesi 150w  Qhagamshelana Ngoku
Iintsuku ze-100W zokukhwela i-Gas Station 12000LM  Qhagamshelana Ngoku
Ukulungiswa kokuKhanya koKhanya kwiSitishi seGesi 130w  Qhagamshelana Ngoku
Isitishi seGesi Ukulungiswa kokukhanya I-Canopy Light Kit 130W  Qhagamshelana Ngoku
Isitishi seGesi Ukulungiswa kokukhanya 130W 15600LM  Qhagamshelana Ngoku
I-130W Isikhululo seRhasi Canopy yezibane eziKhanyayo  Qhagamshelana Ngoku
150W 200W Iitishi zeGesi zokuThoma zeGesi  Qhagamshelana Ngoku
Izibane zeGesi izitambo ze-Canopy Led Retrofit 150W  Qhagamshelana Ngoku
I-Station ye-Gas Station ye-Canopy Fixtures 150W  Qhagamshelana Ngoku
130W Isitishi seGesi seCopy Lighting  Qhagamshelana Ngoku
I-100W Isitishi seGesi se-Canopy Light Bulbs Fixtures  Qhagamshelana Ngoku
60W Izibane zoTekisi zeGesi 7200LM 5000K  Qhagamshelana Ngoku
I-60W ye-Ceiling Mouting iLed Station Station  Qhagamshelana Ngoku
Iimitha zokuLungisa iLed Retrofit Canopy Lights 150W 5000K
Amandla okubonelela: 50000pcs/month
Iimitha Zethu Zingqimba Zingqungquthela I-IP65, yi-IP65, eyenzelwe ngokukodwa iziteshi zegesi kunye neendawo zokupaka iimoto. IziLimi zeLetrofit Canopy ziLed 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. I- Cree Led Canopy Light...
I-Led Square I-Canopy Lighting 150w 5000k
I- Led Yethu Ngaphantsi kwe-Canopy Lighting 150w yi-IP65, eyenzelwe ngokukhethekileyo isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Le 12x12 Led Canopy Light kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. I- Led Square Canopy Light ibe...
I-Led Canopy Lights I-Retrofit Kit 150W 18000LM
I- Canopy yethu eneeLight Lights yi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalari zokupaka. Olu Led Canopy Light Retrofit Kit 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Izibane zeLed Canopy I-Home Depot...
I-Led Gas Canopy Retrofit Kits Izibane 150W
Iikhamera zethu zeLed Canopy Retrofit i-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Le mililo ye-Gas Ledopy 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ukulungiswa kwendawo yokufakelwa kwinqwelo...
I-Outdoor Led Outbreed Canopy Lighting 150W
Izilwanyana zethu ze- Canopy Led Canopy ziyi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Le Led Outdoor Canopy Lighting 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ukukhanya kweLopy Lighted Receded...
Ixabiso leMveliso yeeLayibhondi iLove Mount Canopy Lights 100W
I- Amazon yethu ye- Led Canopy Lights i-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Le Led Canopy Lights Wholesale 100w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ixabiso elisikhokeleyo unama-60W,...
I-Led Canopy Light Fixtures Retrofit Kit 150W
I- Canopy Light Led Retrofit Kit yi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Oku kulungiswa kokukhanya kwe-Canopy 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Iingcamango zokukhanya zombhobho...
I-Canopy Ceiling Light Bulb ne-Photocell 150w
Ukukhanya kwethu kweLuhlu lokuThengisa i-IPC, i-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Le Bulb Light Light 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ukukhanya kwe-Canopy nge-Photocell...
I-Canedy Lighted Fixtures kwiSitishi seGesi 150w
I- Lighted Lamp Canopy Light 150 yi-IP65, eyenzelwe ngokukhethekileyo isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Eli Garaji lokuKhanya lokuKhanya 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Uphahla ne ukukhanya 60W, 100W,...
Iintsuku ze-100W zokukhwela i-Gas Station 12000LM
Izibane Zethu ZesiKhululo seGesi 100w yi-IP65, eyenzelwe ngokukhethekileyo isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. UkuKhanya kweCree Canopy kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. I- Canopy yezibane unama-60W, i-100W,...
Ukulungiswa kokuKhanya koKhanya kwiSitishi seGesi 130w
I- Canopy yethu yoKhanya kwePhanya IP65, ejoliswe ngokukodwa kwizikhululo zegesi kunye neegalaji zokupaka. UkuLungiswa kokuKhanya kokuKhanya 130w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ukufakela kokukhanya kwesikhokelo...
Isitishi seGesi Ukulungiswa kokukhanya I-Canopy Light Kit 130W
IziThuthi zethu zeGesi IP65, ejoliswe ngokukodwa kwizikhululo zegesi kunye neegalaji zokupaka. Esi siKhululo seGesi seMveliso yokuGcina ukuKhanya kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Ukutshintshwa kwendawo yokukhanya...
Isitishi seGesi Ukulungiswa kokukhanya 130W 15600LM
Isitishi sethu seGesi Ukukhanya okuPhezulu yi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Esi siKhululo seGesi ukuKhanya kweziKwama 130w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. IsiKhululo seGesi...
I-130W Isikhululo seRhasi Canopy yezibane eziKhanyayo
Packaging: I-1pc / i-CTN
Izibane zethu zeZibane zegesi ziSibane se-IP65, esenzelwe ngokukodwa isikhululo segesi kunye neegaraji zokupaka. Esi sitishi segesi sinamandla angama-130w iyasebenza ukuze iphinde iphinde ihlawulwe okanye ukufakelwa kumphezulu okuphezulu. Isikhululo...
150W 200W Iitishi zeGesi zokuThoma zeGesi
I- Canopy yethu yeGesi yokuThoma i-IP65, eyenzelwe ngokukhethekileyo isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Esi sikhulu soMbane weGesi yeCope ye-200w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Isitishi segesi sazisa ukukhanya...
Izibane zeGesi izitambo ze-Canopy Led Retrofit 150W
Isitishi sethu seGesi yeCaropy Led Retrofit 150W yi-IP65, eyenzelwe ngokukodwa isiteshi segesi kunye neendawo zokupaka iimoto. Esi siKhululo seGesi siLuhlu lweeLampu kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Isitishi seGesi...
I-Station ye-Gas Station ye-Canopy Fixtures 150W
Izibane zeGesi ze-Canopy Izibane ziyi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Esi siKhululo seGesi Ukukhanya 150w kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. I- Gas Station Canopy Led Fixtures...
130W Isitishi seGesi seCopy Lighting
Izaziso zethu zokuthengisa izitishi zeGesi yi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Esi sikhululo soKhenketho lweCanopy Lighting kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Isikhululo seGesi seLed...
I-100W Isitishi seGesi se-Canopy Light Bulbs Fixtures
Isitishi sethu seGesi sokuKhanya kwe-Canopy 100W yi-IP65, ngokukodwa eyenzelwe isiteshini segesi kunye neegalaji zokupaka. Esi siKhululo seThasi seGesi Ukukhanya oku-100W kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. I- 100W yeGesi...
60W Izibane zoTekisi zeGesi 7200LM 5000K
Isitishi sethu sokukhanya seGesi Ukukhanya kwe-60W yi-IP65, eyenzelwe ngokukodwa isiteshi segesi kunye neendawo zokupaka iimoto. Izibane zoKhululo lweGesi kufanelekile ukufakela okanye ukufakwa kwendawo ephakamileyo. Izibane zoTshwala zeGesi...
I-60W ye-Ceiling Mouting iLed Station Station
Packaging: 1pc / ibhokisi
Amandla okubonelela: 1000pcs a week
I-60W ye-Ceiling Mouting iLed Station Station Iikhokelo lethu liholele igalaji yokupaka ukukhanya usebenzisa i- quality ye-30 ye-3030 ye-LED, inokumelana ne-anti-static ephezulu kwaye isasaze ngakumbi ukukhanya. Le ndawo semithi ukukhanya LED...
KwiChina Ukukhanya kweSitishi seGesi Abaxhasi
Ukukhanya kweSitishi seGesi lenzelwe indawo engqongileyo ngaphandle, ugcine ufike kwi-75% ekusebenziseni kwamandla.Izibane zee- Canopy Izibane zinganciphisa kakhulu ukulungiswa kokukhanyisa kunye neendleko zokutshintshwa kwendawo yakho. Isitishi seGesi esilahlayo Uchungechunge lunokusetyenziswa ngokubanzi kumbane wokungaphandle okanye wesiqingatha ngaphandle, njengokupaka ngaphakathi, iziteshini zegesi, ii-Stairwells, i-Passageway . Izibane ZesiKhululo seGesi yiNtaba yePente, kunye neCandelo leJunction 150W 16050lm Ngaphandle kweRated Tradeproofproof of High Bay Carport Driveway Ukukhanya kweLanga 5700K. Ukukhanya kweSitishi seGesi I-DLC iyafaneleka kwaye ngoko iyakulungelelaniswa neenkqubo zelizwe zokuhlawula. Le 150w LED Lightoping Lighting inikeza i-16050 Lumens kwi-5000K epholile emhlophe. Isebenzisa ii-LED ezingama-2835 nge-Lightlining efficiency 130lm / w, Ukulungele ukutshintsha indawo ye-metal halide engama-400-750w, amandla okusindisa okufikelela kuma-70% ngaphezu kwempilo yethu yemveliso. Ukulwa nokugqithisa, ukuCoca, ukuKhankanya kunye naluphi na ukuKhusela koMbane okanye imililo ngenxa yoMswakama. Ukukhanya kwe-canopy ukulungelelaniswa kwezicelo zangaphandle ezifana nezitishi zegesi, iigaraji zokupaka, ngaphantsi kweendawo, ukulayisha ii-docks, indawo yokugcina impahla, ukungena kwesikhululo, isikhululo senkonzo, njl. Iingqungquthela zengqungquthela isisombululo seprayim Ukukhankanya isilinganisi se-IP65 ngokubhinqa ukukhusela ukulwa ne-corrosion, isitulo sethu segalaji siya kukhanyela kungakhathaliseki ukuba imeko yendalo. Olu luchungechunge lubonisa ngokucacileyo i-station yegesi, i-tunnel, igaraji kunye neendawo zokupaka. Idizayini yeklasi yeli bhanya ihamba kakuhle kwaye ihlala ixesha elide. Iimpawu ze-LED eziphezulu ezingapheliyo ziphumela kumazinga aphezulu okukhanya kunye nokugcinwa kwamandla amakhulu.Iziphumo eziphezulu eziphezulu ze-5000K, i-80 + ii-LED ze-CRI zinyuka kwibhodi yesiphaluka yengundoqo yomnxeba kunye ne-aluminium yokufudumala ukufudumala kuqinisekisa ukuphathwa okuthe ngqo kobushushu kunye nobomi obude.
Izibane zeGesi zokuKhanya Isitishi seGesi esilahlayo Izibane ezibhekiselele kwiSitishi seGesi Ukukhanya kweSitishi seGesi Izibane zeGesi zoTywala